Byteball စျေး - အွန်လိုင်း GBYTE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Byteball (GBYTE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Byteball (GBYTE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Byteball ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $17 260 062.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Byteball တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Byteball များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ByteballGBYTE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$26.41ByteballGBYTE သို့ ယူရိုEUR€22.36ByteballGBYTE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£20.22ByteballGBYTE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.24.03ByteballGBYTE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr234.76ByteballGBYTE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.166.53ByteballGBYTE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč584.53ByteballGBYTE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł98.37ByteballGBYTE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$34.93ByteballGBYTE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$36.97ByteballGBYTE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$586.1ByteballGBYTE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$204.66ByteballGBYTE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$141.76ByteballGBYTE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1976.83ByteballGBYTE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4458.38ByteballGBYTE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$36.26ByteballGBYTE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$40.45ByteballGBYTE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿820.29ByteballGBYTE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥183.46ByteballGBYTE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2823.48ByteballGBYTE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩31317.4ByteballGBYTE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦10231.19ByteballGBYTE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1933.64ByteballGBYTE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴725.61
ByteballGBYTE သို့ BitcoinBTC0.00229 ByteballGBYTE သို့ EthereumETH0.0688 ByteballGBYTE သို့ LitecoinLTC0.486 ByteballGBYTE သို့ DigitalCashDASH0.291 ByteballGBYTE သို့ MoneroXMR0.297 ByteballGBYTE သို့ NxtNXT2059.94 ByteballGBYTE သို့ Ethereum ClassicETC3.89 ByteballGBYTE သို့ DogecoinDOGE7621.34 ByteballGBYTE သို့ ZCashZEC0.321 ByteballGBYTE သို့ BitsharesBTS813.57 ByteballGBYTE သို့ DigiByteDGB845 ByteballGBYTE သို့ RippleXRP93.79 ByteballGBYTE သို့ BitcoinDarkBTCD0.91 ByteballGBYTE သို့ PeerCoinPPC87.62 ByteballGBYTE သို့ CraigsCoinCRAIG12033.54 ByteballGBYTE သို့ BitstakeXBS1126.22 ByteballGBYTE သို့ PayCoinXPY461.05 ByteballGBYTE သို့ ProsperCoinPRC3313.7 ByteballGBYTE သို့ YbCoinYBC0.0142 ByteballGBYTE သို့ DarkKushDANK8475.57 ByteballGBYTE သို့ GiveCoinGIVE57202.01 ByteballGBYTE သို့ KoboCoinKOBO6016.9 ByteballGBYTE သို့ DarkTokenDT24.32 ByteballGBYTE သို့ CETUS CoinCETI76280.17
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 04:40:02 +0000.